Wax ka ogoow 6-da kulan ee lagu go’aamin karo Mustabalka Tababare Solskjær ee kooxda Manchester United – Gool FM
Wax ka ogoow 6-da kulan ee lagu go’aamin karo Mustabalka Tababare Solskjær ee kooxda Manchester United
(Manchester ) 12 Feb 2019. Warsidaha afka dheer ee SunSport ayaa shalay daaha ka rogay in Red Devils ay go’aansatay inay xilka si rasmi ah ugu dhiibto Solskjaer kaa oo adkaaday 10 ka mid ah 11-kii kulan uu kooxda hogaamiyay isla markaan uusan wax guul darro ah la kulmin.
Yeelkeede, wargeyskan ayaa sidoo kale tilmaamay in kooxda aysan u baahneyn in go’aankan ay gaartay ay si rasmi ah ugu dhawaaqdo dhammaadka xilli ciyaareedka ka hor, balse waxaa sidoo kale arintan barbar socda in tababare Solskjaer ay sugayaan kulamo imtixaan ah ee aad u adag, kuwaasoo lagu go’aamin karo mustaqbalkiisa Red Devils-ka.
Laga soo bilaabo Ilaa seddex bilood ka hor waxaa loo maleynayay in Manchester United ay aad aad u adag tahay inay ka mid noqon karto kaalmaha 4-ta sare ee horyaalka Premier League.
Dabcan ma jirto cid aamini karta isbadalka weyn ay sameysay kooxda Manchester United xiliyadii lasoo dhaafay, waxayna u muuqataa inay tahay arin mucjiso ah uu ku hogaamiyay macalinka reer Norway ee Ole Gunnar Solskjær.
Tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa si ku meel gaar ah kula wareegay shaqada tababarka ee kooxda Red Devils 1-da bishii December ee lasoo dhaafay, kadib markii shaqada looga ceyriyay Jose Mourinho sababa la xiriira natiijo xumo kooxda soo food saartay.
Solskjær ayaa qabtay shaqada kooxda Manchester United iyadoo fadhida kaalinta 6-aad, waxayna farqi weyn u jireen booska 4-aad ay haatan fadhiyaan, balse waxa haatan dhacay ayaa lagu tilmaami karaa inay tahay mucjiso, mana aysan dhadhaminin Red Devils magaca guuldaro ilaa iyo haatan, waxay gaareen 11 guul iyo hal barbaro ah.
Laakiin haatan tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa waxaa sugaya imtixaan aad u adag, kaasoo uu kaga bilaabmi doono kulanka lugta hore wareega 16-ka Champions League ay caawa kula ciyaari doonaan PSG, iyagoo imtaaxaankan horyaala ay ku soo afjari doonaan kulanka ay kula ciyaari doonaan Manchester City horyaalka Premier League.
Hadaba kulamada imtixaanka adag ay mari doonto kooxda Manchester United ayaa kala ah:
18/Feb: Manchester United ayaa kula ciyaari doonto Chelsea “FA Cup”
24/Feb: Manchester United ayaa ku soo dhaweyn doonta Liverpool garoonkeeda Old Trafford horyaalka Premier League.
6/Marso: Manchester United ayaa ku booqan doonta kulanka lugta labaad wareega 16-ka Champions League kooxda Paris St Germain.
10/Marso: Manchester United ayaa waxay sidoo kale marti ugu noqon doontaa Arsenal, horyaalka Premier League.
16/Marso: Manchester United ayaa ku soo dhaweyn doonta garoonkeeda Old Trafford kooxda daris wadaaga ay yihiin ee Manchester City’s kulan ka tirsan Premier League.
Intaas waxaa dheer, kooxda ayaa sidoo kale ku wajihi doonta kooxaha Crystal Palace iyo Southampton 27-ka Febraayo iyo 3-da March horyaalka Premier League.
Mid ka mid ah halyeeyada Arsenal oo farta ku fiiqay halka ay dhibaatada ka heysato Gunners